विचार ब्लग |
शिक्षामा कस्तो राजनीति आवश्यक ?
[तीर्थराज खरेल] शिक्षामा राजनीति गर्नुहुँदैन र राजनीतिले गर्दा शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएको र बिग्रिनेक्रम बढेर गएको भन्दै अभिभावक र सरोकारवाला चिन्तित भएको पाइन्छ । राजनीतिको कपटपूर्ण खेलको अभ्यास गर्ने थलोका रुपमा शिक्षण संस्था पनि परिचित हुन थालेको छ । टाठाबाठाको भुलभुलैयामा विद्यार्थी पनि आफ्नो लक्षित गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नुभन्दा पनि विभिन्न रुपका आन्दोलनमा हाम्फाल्ने प्रवृत्ति छ […]
बालबालिकाको मुहारमा बालदिवसको झल्को आओस्
(नरेन्द्र ढकाल ) भन्ने गरिन्छ आजका बालबालिका भोलीका कर्णधार हुन् तर यो भनाई उखान र टुक्का जस्तै मात्र बन्न पुगेको छ । वातावरण, सक्षमता, अनुभव र उनीहरूले पाएका अवसर, सामाजिकीकरणका आधारमा बालबालिकाको परिभाषामा विविधता हुन्छ तर १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सबै बालक वा बालिका हुन् भनेर स्पष्टसंग उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा करिब ४८ प्रतिशत […]
श्रमप्रतिको सम्मान : विकासको मुख्य आधार
[तीर्थराज खरेल] हामी ठूलो रुख देख्दछौं, तर रुख हुनका लागि त्यसले गरेको संघर्ष, आँधीहुरी, शीत र घामसँग जुधेको पृष्ठभूमि हामी सम्झन्नांै । मानिस शिखरमा पुगेको मात्र देखिन्छ, मानिसको सफलता मात्र देखाइन्छ, सुख प्राप्तिका लागि उसको पृष्ठभूमिको वर्णन कमै हुन्छ । सफलता प्राप्त गर्न मानिसले जीवनमा ठूलो संघर्ष गरेको हुन्छ । आम सञ्चार क्षेत्र र हाम्रो […]
अन्यौल र चुनौतिमा छन् जनप्रतिनिधि
[दीपेन्द्र भट्टराई] हामी सबैलाई ठूलै ठाउँको बासिन्दा हुने रहर थियो । नगर, उपमहानगर र महानगरको बासिन्दा हुँदा के–के नै हुन्छ भन्ने थियो । राज्यले नगर, उपमहानगर र महानगर घोषणा गरेर नागरिकको त्यो रहर पूरा गरिदियो । राज्य पनि दंग । नागरिक पनि दंग । गाउँपालिका, नगर, उपमहानगर, महानगर हुनलाई थुप्रै मापदण्ड छन् । विकास, जनसंख्या, […]
अविगलको यति धेरै माया र शंका
[नरेन्द्र ढकाल] नवदीपले आफ्नो कुरा सुनाए पछि म आफ्नो अविगललाई सम्झेर दिनभरी नै मनलाई भुलाउने प्रयत्न गरिरहेको थिए । अविगल मेरो मुटु हो म बाँच्नजेल सम्म धड्किन्छे भने तर आज त्यही मुटु अस्वथ्य भएको छ । आज अविगल मलाई अनेक शंका र उपशंका गरिरहेकी छ । मैले गल्ती नगरेको होइन गल्ती गरे तर सुधार गर्ने […]
कहीले सम्म भ्रष्ट्रचारीलाई संरक्षण गर्ने ?
[नरेन्द्र ढकाल] जसको शक्ति उसैको भक्ति भने झैं नेपालमा जसले जे गरेपनि हुन्छ ? पूर्खाले नेपाललाई सार्वभौम मुलुक कायम गर्न कति संघर्ष गरे एक पटक इतिहास पल्टाएर हेरौं । अनि हामी आज के गर्दै छौं आज गरेका कामले भोलीका दिनमा कस्ता नतिजा आउला भन्ने एकपटक मनन गरौं । कतै हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो प्रहार […]
परिर्वतनको संघारमा देवानी कानुन !
[दिपेन्द्र भट्टराई] देवानी कानुन त्यस्तो कानुन हो जुन हरेक सामान्य नागरिकदेखि उच्च ओहादामा बसेकाहरुसम्मको परिवार र सम्पत्ति संगको समस्यामा प्रतिविम्वित हुन्छ । सवै कानुन प्रणालीका छुट्टै महत्व भए पनि नागरिकको दैनिकीसँग देवानी कानुनको विशेष सम्वन्ध रहन्छ । व्यक्ति जन्मेदेखि मृत्युसम्म उसले सम्पत्ति, विवाह, सम्वन्धबिच्छेद लगायका विषय देवानी कानुनले सम्वोधन गर्छ । संसद्मा विचाराधीन देवानी संहिताले […]
किन बोल्दैनन् नागरिकहरु ?
[विष्णुप्रसाद खरेल] राज्य सबैको हो । अझ, नेपालका नागरिकहरुलाई संविधानले सर्वाधिकारसम्पन्न सार्वभौम नागरिकका रुपमा स्थापित गरेको छ । अर्थात्, राज्यको सञ्चालन नागरिकहरुको चाहना अनुरुप हुनुपर्दछ । तर, के नेपालमा त्यसै भइरहेको छ त ? नागरिकहरुले चाहेका वा नागरिकको अधिकतम् चाहना अनुरुप राज्य सञ्चालन भइरहेको छ त ? मलाई लाग्दछ, नेपालका दुईतिहाई नागरिकहरु राज्य सञ्चालनका विधि […]
अन्यौलमा गुज्रिएका जनप्रतिनिधिहरु : नियत कि नियति ?
[विष्णुप्रसाद खरेल] गत हप्ता स्तम्भ लेख्न बसेको थिएँ । के लेखौं भनेर, सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव मागें । २२ जना मित्रहरुले विभिन्न सुझाव दिनुभयो । यस हप्तामा ती सुझावहरुलाई हेरें । कानून व्यवसायी एवम् अधिकारकर्मी दीपेन्द्र भट्टराईजीले दिनुभएको सुझाव उपर्युक्त लाग्यो । त्यसैलाई शीर्षक बनाएर यो स्तम्भ तयार गर्दैछु । दीपेन्द्रजीको सुझावसँग मेल खाने एउटा समाचारले […]
जनप्रतिनिधि दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ
[नरेन्द्र ढकाल] निकै लामो समयमको जनप्रतिनिधि विहिनता पश्चात बल्ल तल्ल स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा सकिए पनि बाँकी एक प्रदेश अर्थात प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गतेका लागी मिति घोषणाा गरिएको छ । यसरी लामो समयपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको सहभागिता उत्साहजनक रुपमा देखियो भने जनअपेक्षा […]